ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ဗွီဒီယိုခလုတ်များ | Gadget သတင်းများ (စာမျက်နှာ ၃)
PlayStation က Play at Home အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကတ်တလောက်မှအကောင်းဆုံးဂိမ်း ၄ ခုကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။ uncharted - The Nathan Drake Collection နှင့် Journey ။
ဒီဆောင်းပါးမှာလက်ရှိစျေးကွက်မှာအများဆုံးထောက်ခံချက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အရည်အသွေး, စျေးနှုန်းနှင့်ပလက်ဖောင်းအလေးပေး။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရသောခံထားရသည့်အချိန်ကာလအတွင်းအခမဲ့ရရှိနိုင်သောသင်တန်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုစုစည်းထားသည်။
ဒီနေ့မှာဗီဒီယိုဂိမ်းစက်ရဲ့အစကိုမှတ်မိဖို့အိမ်မှာသုံးဖို့ဂန္ထဝင်ဂိမ်း ၂၀၀၀ ကျော်စာရင်းပြုစုထားတယ်။
Sony သည် PS5 အသစ်နှင့်၎င်း၏တရားဝင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်အရာများအားလုံးသည်သင့်ကိုစကားအပြောများစေမည်။
COVID-19 အတွက် # StayInHome ကိုသုံးရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဂိမ်းများ
Netflix ၏ Resident Evil စီးရီး၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
Resident Evil ၏ကြောက်မက်ဖွယ်ဗီဒီယိုဂိမ်း Saga တွင်စကြာ ၀ inာ၌တည်ဆောက်ထားသည့်စီးရီး၏အနှစ်ချုပ်ကို Netflix ကိုယ်တိုင်မှတဆင့်စီစစ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Dell ၏ Alienware pc ၏စွမ်းအားအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောဂိမ်းကစားသူများအတွက်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတစ်ခုကမ်းလှမ်းရန်အဆိုပြုချက်ကိုသိရှိနိုင်သည်။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Energy Sistem ESG5Shock headphones
စွမ်းအင်၊ အရည်အသွေးနှင့်အသံတုန်ခါမှုနည်းပညာတို့ဖြစ်သော Energy Sistem ESG5Shock၊
Google Stadia: ဘာလဲ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဂိမ်းများကဘာလဲ
ဂူးဂဲလ်ရဲ့ streaming ဗီဒီယိုဂိမ်းပလက်ဖောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုသိချင်ရင်ဆက်ဖတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Fortnite အခန်း2ရာသီ 1 နှင့်အတူပြန်ဖြစ်ပါတယ်
စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းမြေပုံအသစ်သည် Fortnite အသစ် update ၏လက်မှရာသီဥတုကို ပြန်လည်စတင်၍ အခန်း ၂ သို့ရောက်ရှိသည်
Fortnite ကော? Fortnite ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲ?
နာရီအနည်းငယ်ကြာလျှင် Fortnite ကိုသင်ကစားရန်ကြိုးစားခဲ့လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောတွင်းနက်သည်တွင်းနက်တစ်ခုကိုစေ့စေ့ဆင်ခြင်ရန်ဖြစ်သည်။ Fortnite အလုပ်မလုပ်ပါ
PES eFootball 2020 - သူ့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့တွင် eFootball PES 2020 ဖြစ်သည်။ Konami သည်ဒဏ္myာရီဆန်သော PES ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။ သင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ သင်နှစ် ဦး စလုံးဂိမ်းများကိုဈေးကွက်တွင်ရှိနေသည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
eFootball PES 2020 FC ဘာစီလိုနာထုတ်ဝေမှုသည်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်
eFootball PES 2020 FC Barcelona Edition ကိုစက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်တရားဝင်ရောင်းချမည်။ ဒီဗားရှင်းထုတ်ပြန်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဂူဂဲလ်သည် Stadia နှင့်ပတ်သက်သည့်တရားဝင်အချက်အလက်အားလုံးကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
နို ၀ င်ဘာလတွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်ကုမ္ပဏီ၏ဂိမ်းများအတွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Google Stadia ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
Trading Card Adventure Destiny ကလေးကို iOS နှင့် Android တွင်ရနိုင်သည်
Destiny ကလေးအရောင်းအ ၀ ယ်ကဒ်ဂိမ်းကိုယခုအခါ Play Store နှင့် App Store တွင်အခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။
Nintendo Switch အသုံးပြုသူများသည်ယခုနှစ် Diablo III ဂိမ်းကိုရရှိနိုင်ပါသည်
လူကြိုက်များသည့် Diablo III ဂိမ်းသည် Nintendo console ကိုရောက်ရှိရန်ကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါဒဏ္gameာရီဂိမ်းတစ်ခုထဲကဖြစ်လိမ့်မည်
PlayStation သန်းပေါင်း ၅၀၀ ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပရန် Sony က Limited Edition Translucent PS4 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Sony ၏ PlayStation ပထမမျိုးဆက်သည်စျေးကွက်ထဲသို့ရောက်သောအခါဤစက်သည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်သောနိုင်ငံစုံဆိုနီတွင်အရောင်းရဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် PlayStation သန်း ၅၀၀ ကျော်ရောင်းချခဲ့ပြီး၎င်းကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်၎င်းမှအထူးထုတ်ဝေမှုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ PS500
အကယ်စင်စစ်ထိုအရပ်၏ဝါရင့်အများဆုံးမြွေနှင့်အတူပုံမှန် Nokia ဂိမ်း, သတိရပါ။ အတွင်း…
HyperX Pulsefire Surge ဂိမ်းကစားနည်းကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
HyperX mouse ၏ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သော Pulsefire Surge ကိုယခုအခါစျေးကွက်တွင်ယူရို ၆၉.၉၉ ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
ဤရွေ့ကားဇူလိုင်လ 2018 အတွက် PlayStation Plus နှင့်ရွှေနှင့်အတူ Live ဂိမ်းများဖြစ်ကြသည်
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် Xbox Live နှင့် PS Plus နှစ်ခုလုံးတွင်အခမဲ့ download ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဂိမ်းအားလုံးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
Fortnite ကစားသမားများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၈၀ အား In-game ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်သုံးစွဲသည်
ကစားသမားများအနေဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၈၀ ကို Fortnite ၀ ယ်ယူမှုတွင်သုံးစွဲသည်။ ဒီဂိမ်းကနေ Epic Games ၏ကြီးမားသောဝင်ငွေအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဤသည် E3 2018 ကာလအတွင်း Square Enix တင်ပြခဲ့သည်အရာအားလုံးဖြစ်ပါတယ်
Frozen or Tangled မှဇာတ်ကောင်များပါဝင်သော Kingdom Hearts3သည် E3 2018 တွင် Square Enix တင်ပြသောအကြောင်းအရာနှင့်ဤအကျဉ်းချုပ်၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ E3 2018 တွင် Microsoft မှတင်ပြခဲ့သောအရာအားလုံး၏အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏အဖြစ်အပျက်ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအရေးအကြီးဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းပွဲတော် E3 2018. တွင်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
Bethesda သည် E3 တွင်နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှ Fallout 76 ထွက်ရှိမည့်နေ့ကိုကြေငြာခဲ့သည်
ဂိမ်းအသစ်သည်နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင်စင်ပေါ်သို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။ ဒီဟာက ...
ဖီဖာမှသတင်းများ - ယူအီးအက်ဖ်အေချန်ပီယံလိဂ်ဟာဒီနေရာမှာအများကြီးရှိပါတယ်
FIFA 19 ကို Electronic Arts မှ E3 ပွဲတွင်ကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဘောလုံးဗီဒီယိုဂိမ်းသည် UEFA Champions League လိုင်စင်ပါ ၀ င်သည်။
Origin Access Premier၊ အီလက်ထရောနစ်အနုပညာ၏စာရင်းပေးသွင်းမှုပုံစံအသစ်
အီလက်ထရွန်နစ်အနုပညာသည်သူတို့မထွက်ခွာမီ ၅ ရက်အလိုတွင်ဂိမ်းအသစ်များရယူရန်အတွက် subscription model အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ Origin Access Premier အကြောင်းပါ
Activision အသစ်သည် Cr3 Bandicoot N. Sane Trilogy News နှင့်အတူ EXNUMX အတွက်အပူပေးသည်
ပြီးတော့ E3 ဟာအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုလျှင်အရေးအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီအချို့စတင်နေပြီဖြစ်သည် ...
ဂိမ်းကစားသူများအတွက်အရည်အသွေးရှိသောကြွက်များနှင့်ကီးဘုတ်များကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိလျှင်၎င်းသည် Logitech ဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသည် ...
ထပ်မံကျ 76: New Fallouth မိတ်ဆက် Bethesda
ထပ်မံကျ 76: Bethesda ရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ဂိမ်းအသစ်။ ကုမ္ပဏီ၏ဂိမ်းနောက်တွဲယာဉ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ၊ ၎င်းသည်ကျန်ရှိသည့် Saga နှင့်အလွန်ကွာခြားမည်ဟုကတိပေးသည်။
HP Mindframe နားကြပ်များကြောင့်ဂိမ်းများကစားရန်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နားကြပ်များကိုနာရီများစွာအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နားရွက်အတွက်ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပါ။
Dark Souls Remastered တွင်တွေ့ရသောသွေးပမာဏ
၎င်းတို့သည် Dark Souls တွင် Bloodborne အဆင့်ကို Remastered တွေ့ပြီး၎င်းသည် GTA V. တွင်လည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းမိနိုင်မည့်ဤစပ်စုသောဇာတ်လမ်းကိုရှာဖွေပါ။
Fortnite မှ YouTube ၌အခမဲ့ V-Bucks လိမ်လည်မှုများကိုသတိပေးသည်
Fortnite မှ YouTube ရှိ V-Bucks လိမ်လည်မှုများအကြောင်းသတိပေးထားသည်။ လူကြိုက်များသောဂိမ်း Epic Games တွင်အသုံးပြုသူများထံမှဒေတာ (သို့) ပိုက်ဆံရယူရန်ကြိုးစားသောဤလိမ်လည်မှုများကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
ပိုကီမွန် Go ကို Alolan Pokémonဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်မည်
ပေါ်ပြူလာPokémon Go စမတ်ဖုန်းဂိမ်း၏နောက်ထပ်အဓိက update သည် Alola Pokémonကိုယခုနှစ်နွေရာသီတွင်ထည့်ပေးလိမ့်မည်။ Niantic ...
Sony အနေဖြင့် E3 2018. တွင်ထုတ်ဖော်ပြသမည့်ဂိမ်းများကိုအတည်ပြုလိုက်သည်။ ဇွန်လတွင်ကျင်းပမည့်ပွဲတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ have မှပါ ၀ င်မည့်ဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Dragalia Lost, ဒီနှစ် Nintendo ရဲ့ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်း
Reuters နှင့် Nintendo တို့သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ပထမဆုံးသော Nintendo ဂိမ်းဖြစ်မည့်သတင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဗီဒီယိုဂိမ်းများမှလုယက်သေတ္တာများကိုဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ပိတ်ပင်ထားသည်။ ဂိမ်းထဲမှာကစားစရာသေတ္တာများအဆုံးသတ်ရန်နိုင်ငံတရားမျှတရေးဝန်ကြီးဌာန၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xbox Gold ဂိမ်းများသည် Metal Gear Solid V: Phantom Pain နှင့်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်
ဒီအချိန်တုန်းက Microsoft က Metal Gear Solid: The Phantom Pain ကိုအလောင်းအစားပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည် Sony သည်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကပေးခဲ့သောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သိသင့်သည်။
Konami သည်ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံ PES သို့ရှုံးသည်
ဘောလုံးပွဲများတွင် Pro Evolution Soccer နှင့် Konami တို့ကိုဆိုးဝါးစွာထိုးနှက်နိုင်သည့်နောက်ဆုံးသောချောင်းသည်ချန်ပီယံလိဂ်၏လိုင်စင်ကိုအာမခံပေးသော UEFA နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
iOS အတွက် Fortnite ဟာဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၅ သန်းကျော်ရပါတယ်
အကယ်၍ iOS တွင်ကစားနေသည့်ဂိမ်းတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည် Fortnite ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်သောဂိမ်း ...
ပိုကီမွန် GO ပွဲတော်မအောင်မြင်ခြင်းသည် Niantic အားဒေါ်လာ ၁.၅ သန်းကုန်ကျသည်
Niantic သည်Pokémon GO Fest အတွက်ဒေါ်လာ ၁.၅ သန်းပေးရမည်။ ချီကာဂို၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်၏ပျက်ကွက်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီမှပေးရမည့်လျော်ကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
ASUS သည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည့် ROG Gladius II Origin ကိုတင်ပြသည်
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီတခုသည် ROG Gladius ၏တတိယမျိုးဆက်ကိုတရားဝင်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းမှာမတူညီသောအပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သောခလုတ်များပါရှိသည့် mouse တစ်ခုဖြစ်သည်။ resolution 12.000 DPI, optical နှင့် 250 DPI အမြန်နှုန်းနှင့်အတူ။
God of War for PS4 သည်ကင်မရာ၏အနေအထားကြောင့်၎င်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ခဲ့သည်
တီထွင်သူများက ၀ န်ခံသည်မှာသူတို့တီထွင်စဉ်ကကင်မရာ၏နီးကပ်မှုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာသောဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါတို့လေ့ကျင့်ရန် Paradox Interactive သည်အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ကိုလိုနီခေတ်ကိုရေးဆွဲထားသော Surviving Mars အတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုသင်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီလော။
အဆိုပါ Tomb Raider trilogy ပာအပြည့်အဝ remastered Steam မှလာမယ့်နေသည်
Valil ကမူမူလ trilogy ပာ Steam သို့အပြည့်အ ၀ ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုကတိပြုခဲ့သည်။
Fortnite Battle Royale သည်လက်ကိုင်ဖုန်းများသို့လာသည်
Fortnite Battle Royale ကိုလက်ကိုင်ဖုန်းများပေါ်တွင်ဖြန့်ချိမည်။ ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေမှာလူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသပါ။
PUBG မိုဘိုင်းဂိမ်းကို iOS တွင်မည်သို့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရမည်နည်း
အကယ်၍ သင် PUBG ဂိမ်းကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ယခုဂိမ်းကိုမည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။
လာမည့်နှစ်တွင် PS3 နှင့် PS Vita မှထွက်ခွာရန်အခမဲ့ PS Plus ဂိမ်းများ
PlayStation ပလက်ဖောင်းဟောင်းများသည်လာမည့်နှစ်မတ်လတွင် PS PS ဂိမ်းများကိုနှုတ်ဆက်မည်ဟုပြောလိမ့်မည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရုပ်ရှင်ရုံများရိုက်ကူးထားသော Hedgehog ရုပ်ရှင် Sonic
Sonic the Hedgehog ရုပ်ရှင်သည်မူလသတ်မှတ်ထားသောနေ့မှနောက်တစ်နှစ်အကြာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
Nintendo ၏ Mario အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှကိုဤစွယ်စုံကျမ်းတွင်ရရှိနိုင်သည်
မင်းကအသက် ၄၀၊ ၅ နှစ်ဖြစ်ဖြစ်မာရီယိုအကြောင်းပြောရင်ငါတို့ဘယ်သူပြောနေတာလဲဆိုတာသေချာတယ်။ မာရီယိုသည် ...
Google Dinosaur ဂိမ်း
Kingdom Hearts3အတွက်နောက်တွဲယာဉ်အသစ်က Monsters SA မှယောက်ျားများကိုပြသည်
ဗီဒီယိုဂိမ်းထုတ်သည့်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တိကျသောအချက်အလက်မရှိသေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာမှာ Monsters SA ၏အဓိကဇာတ်ကောင်များပါသောနောက်တွဲယာဉ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် RiME နှင့် Knack တို့မှ PlayStation Plus ကိုထိမှန်ခဲ့သည်
Sony တွင်မူ RiME နှင့် Knack တို့ကိုသုံးဆောင်ရန်နီးပါးစဉ်းစားနိုင်သည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုသူတို့နှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့ပရိသတ်များကိုအနည်းငယ်ပိုမိုစွဲဆောင်စေခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်သည်လည်းဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုလွှင့်ထုတ်မည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဤကဏ္ enter သို့အဘယ်ကြောင့်သွားရသည့်အကြောင်းရင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
God of War တွင် PlayStation4အတွက်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်ရှိပြီးဖြစ်သည်
ကျနော်တို့ဗီဒီယိုတော်တော်များများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီဂိမ်းကိုငါတို့လက်ထဲတရားဝင်တရားဝင်ဘယ်မှာသွားမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်၊ ငါတို့သိပြီးသားပါ။
Age of Empires: အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောထုတ်ဝေမှု၊ မဟာဗျူဟာနှင့်လွမ်းဆွတ်မှုများပေါများသည်
Age of Empires: Definitive Edition သည်ယခုအခါကျွန်ုပ်တို့၏ PC များသို့ရောက်ရှိရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဤအရေးကြီးမျက်နှာမျက်နှာပြင်တွင်ဘာတွေပါဝင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာသိရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
PC အတွက် Final Fantasy XV တွင်ဖြန့်ချိမည့်ရက်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိသည်
Square Enix သည်ဤဗီဒီယိုဂိမ်းအတွက်ထုတ်လွှတ်မည့်နေ့ရက်ကိုသတ်မှတ်ရန်နှင့်လိုအပ်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူလိုက်ဖက်ရန်သင့်တော်ကြောင်းတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
Dark Souls Remastered, HD အရောင်းဆိုင်အားလုံးနီးပါးသို့ပထမဆုံးအရစ်ကျရောက်ရှိသည်
Dark Souls သည်တစ်ချိန်ကပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောပလက်ဖောင်းအမြောက်အများကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ဂိမ်းကစားသူများသာချီးကျူးနိုင်သည်။
NVIDIA ၏ဂိမ်းကစားသူများအတွက်သတ်မှတ်ချက်သည် ၆ လက်မအရွယ် 65k resolution ရှိသည့် Monitor ဖြစ်ပြီး 4Hz Refresh Rate ဖြစ်သည်
ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ထုတ်လုပ်သူ NVIDIA သည် CES တွင် ၆၅ လက်မမော်နီတာ၊ 65K resolution၊ HDR၊ Refresh Rate4Hz နှင့် ms latency ထက်နည်းသည်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကား PlayStation Plus အားအပေါ်ဇန်နဝါရီ 2018 ဘို့အခမဲ့ဂိမ်းဖြစ်ကြသည်
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် PlayStation Plus တွင်အခမဲ့ဂိမ်းများကိုငါတို့သိတော့မည်ဖြစ်သော်လည်း Deux Ex သည်အရာအားလုံးထက်ကျော်လွန်နေသည်ဟုငါပြောရပေမည်။
ဒီအကြောင်းကိုအများကြီးသိပြီးဖြစ်တဲ့ Sony က PlayStation Store မှာ ၆၀% လျှော့စျေးဖြင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုစတင်ရန်အားနည်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
Steam ဂိမ်းပလက်ဖောင်းအတွက်လျှော့စျေးရက်ကိုတရားဝင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ရာသီအတွင်းနှစ်စဉ်လိုပဲ ...
အပြည့်အဝစုဆောင်းခြင်းဖြန့်ချိခြင်းဖြင့် Capcom သည် Street Fighter ကိုနှစ် ၃၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပသည်
Street Fighter ၏နှစ် ၃၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပရန်အတွက် Capcom မှယောက်ျားများသည် arcade ဗားရှင်းတစ်ခုစီကိုအတူတကွစုစည်းပေးလိမ့်မည်။
McLaren Formula 1 အဖွဲ့သည်ဂိမ်းကစားသူအားတရားဝင် Simulator ကားမောင်းသူအဖြစ်ငှားရမ်းသည်
ဤသည်က“ ကလေးငယ်၊ စက်လေးနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သောအရာတစ်ခုခုလုပ်ခြင်း” ကိုသတိရစေသည်။
ဆိုနီသည် Black Friday အစီအစဉ်များကိုစတင်ခဲ့သည်
သင်၏ရင်တွင်းနှင့်ပွင့်လင်းမှုရှိစေမည့် Black သောကြာနေ့အတွက်ထူးခြားသောကမ်းလှမ်းမှုများမှာ Gran Turismo Sport မှ ၅၀% ရရှိထားသည်။
PlayStation Plus သည်ဥရောပတွင်ငါးရက်အခမဲ့ဖြစ်သည်
Sony သည် PlayStation Plus ၀ န်ဆောင်မှုကို၎င်း၏ဥရောပရှိသုံးစွဲသူများအားအကျိုးကျေးဇူးများမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေရန် ၅ ရက်ကြာအချိန်ပေးခဲ့သည်။
EA Backtracks Star Wars အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - စစ်မြေပြင် II
ဆိုနီနှင့်၎င်း၏ဆုအစီအစဉ်များသည် PlayStation4ကစားသမားများကိုဆုများရရှိထားပြီးဆုများရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လာမည့်ကြာသပတေးနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် FUT Champions မှပထမဆုံးလစဉ်ဆုများကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဆုသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။
နောက်ဆုံး Fantasy XV PC လိုအပ်ချက်များပေါက်ကြား
Final Fantasy XV သည် PC အတွက်အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်အပြည့်အဝအသုံးချလိုပါကသင့်ကွန်ပျူတာကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Nintendo ၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် Animal Crossing အသစ်ဖြစ်သည်
Animal Crossing Pocket Camp ဆိုတာကတော့နို ၀ င်ဘာလမှာရောက်မယ့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေအတွက် Animal Crossing version ရဲ့နာမည်ပါ
Destiny2သည် console အသုံးပြုသူများကိုရက်ရက်စက်စက်ကျဆင်းစေသည်
PC အတွက်ပဲတပြိုင်တည်းပဲ Destiny2ဟာသုံးစွဲသူများကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်
အိမ်လုပ် Raspberry Pi-based Nintendo ခလုတ်သည် retro ဂိမ်းများအားလုံးသုံးနိုင်သည်
Modder Tim Lindquist သည် Raspberry Pi 3: NinTIMdo RP ကို ​​အခြေခံ၍ အိမ်လုပ် Nintendo Switch တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်သင်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ရန်အရာအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်
Razer Kiyo၊ 'streamers' အတွက်ပါ ၀ င်သည့်အလင်းပါသည့်ကင်မရာ
ယခုတွင် streamers များသည်စိတ်ကြိုက်အလင်းရောင်ဖြင့်ထုတ်လွှင့်ရန် webcam အသစ်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် Razer Kiyo နှင့်၎င်း၏ LED ring ဖြစ်သည်
PlayStation4တွင်သဟဇာတဖြစ်သော Controller အသစ်သုံးခုရောက်ရှိလာသည်
လာမည့်နို ၀ င်ဘာလမှ PlayStation လေးခုသို့ရောက်ရှိသောထိန်းချုပ်မှုအသစ် ၃ ခုသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကြည့်ကြစို့။
gaming desktop တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှု
Polyphony ၏မူလအစသို့ပြန်သွားသော Gran Turismo Sport အားလေ့လာခြင်း
Sony အသင်းသည်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်အခမဲ့ပေးအပ်ထားသော Gran Turismo Sport ၏သရုပ်ပြကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်
၎င်းတို့သည်သင်၏ Nintendo Switch cartridges အတွက်Pokéball၏အသွင်သဏ္ဌာန်တစ်ခုဖန်တီးပေးသည်
သင့်ရဲ့ Nintendo Switch အရာတစ်ခုကိုသိုလှောင်နိုင်တဲ့ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ပိုက္ကာဘောလုံးကိုကြည့်ပါ၊ သင်ကသူတို့ကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပြီးကာကွယ်နိုင်သည်။
ယခုတွင်သင်သည် Gran Turismo Sport ၏ Demo ကို download လုပ်ယူနိုင်သည်။ ဤကားသည်သင်၏ကားများဖြစ်သည်
ဒီသရုပ်ပြသည် Sony ကဒီရက်သတ္တပတ်အတွင်းစီးရီးကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းမှာကားများစာရင်းအဖြစ်သင်သိသင့်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါးကျော်ကြားခဲ့သောတင်ဆက်သူနှင့်ထုတ်ဝေသူ Manolo Lama သည်လွတ်မြောက်တော့မည်ဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိခဲ့ပါ။
Commodore 64, retro ကိုဝတ်ဆင်ပြီး mini version တစ်ခုပေါ်လာသည်
၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၏ဒဏ္computerာရီဆန်သောကွန်ပျူတာ Commodore 64 သည်ပိုမိုသေးငယ်သောပုံစံဖြင့်ယူရို ၈၀ ဖြင့်ပြန်လည်ရှင်သန်လာသည်။
ကျနော်တို့က FIFA 18 ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတယ်၊ ဒါကဒီဂျစ်တယ်ဘောလုံးရဲ့ဘုရင်ပဲ
ဒီနှစ်မှာတော့ FIFA 18 ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရောင်းရဆုံးဘောလုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကိုဒီနေ့မှာဆန်းစစ်သွားမှာပါ။
FIFA 18 သရုပ်ပြကို PlayStation Store တွင်ရနိုင်သည်
၎င်းကိုသင်အခမဲ့ download ရယူပြီးပထမဆုံးအရသာပြုလုပ်ရန်၎င်း၏ display mode ကိုနှစ်သက်နိုင်သည်။
LA Noire သည်နို ၀ င်ဘာလတွင် PS4၊ Xbox One နှင့် Switch သို့ပြန်သွားသည်
LA Noire သည်နို ၀ င်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းပလက်ဖောင်းအများစုသို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။
Destiny2ကို PlayStation4နှင့် Xbox One တို့တွင်ရနိုင်သည်
Activision ကိုမနေ့ကစတင်ခဲ့သော FPS တစ်ခုအားမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနောက်လိုက်များအများဆုံးအဖြစ်ရောင်းချရန်အတွက် Destiny2သည် PS4 နှင့် Xbox One သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Nintendo သည်မာရီယို၏အလုပ်ကို၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနှစ် ၄၀ နီးပါးအကြာတွင်ရေပိုက်သမားအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
Razer Basilisk mouse ဖြင့်သင်၏ခလုတ်ကို နှိပ်၍ FPS ကိုပျော်ဝင်သွားလိမ့်မည်
Razer ကုမ္ပဏီသည် Fasil ကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ရန်ခလုတ်တစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့် Basilisk ကိုတင်ပြခဲ့သည်
Samsung CHG90, ၄၉ လက်မမော်နီတာ 'ဂိမ်း' QLED နည်းပညာ
Gamescon ကာလအတွင်း Samsung သည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်လည်းရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၄၉ လက်မအရွယ် Samsung CHG90 ကွေးကောက်ဂိမ်းမော်နီတာကိုပြသခဲ့သည်
Shenmue III နောက်တွဲယာဉ်သည်ရွယ်တူချင်းများကိုစိတ်ပျက်စေသည်
ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးကင်းမဲ့မှုနှင့်နောက်တွဲယာဉ် ၀ င်သူများ၏ဖော်ပြမှုများသည်ဆွေးနွေးရန်များစွာပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သင်မြင်လိုပါသလား။
ဒီဟာက PC အတွက် Final Fantasy XV ကိုကြေညာတဲ့ 4K နောက်တွဲယာဉ်ပါ
Finalcom Fantasy XV သည်ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်အတူ PC သို့လာလိမ့်မည်ဟု Nvidia ၏လက်မှ Gamescom တွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
PlayStation4နှင့် Xbox One S တို့သည်ယခုနှစ်တွင်ဈေးကျနိုင်သည်
Turtle သဲသောင်ပြင်၏အဆိုအရ PlayStation4Slim နှင့် Xbox One S တို့သည်ယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်သိသိသာသာလျှော့စျေးများဖြင့်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုတင်ပြနိုင်လိမ့်မည်
ဆိုနီသည်သုံးစွဲသူများအားဆယ်လကြာ PS + သုံးစွဲသူများကိုလျော်ကြေးပေးပြီး ၁၂ ခု၏စျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်
Sony သည် PlayStation Plus ၏ ၁၅ လထက်မနည်းသောအချိန်ကို ၁၂ လစျေးနှုန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်၊ သူတို့မတက်မီချွေတာရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
ဘောလုံးဂိမ်းကိုနှစ်သက်ပါသလား။ ဒါကတော့ DualShock PlayStation FC ထုတ်ဝေမှုပါ
ဒီ command နှင့် Sony သည်သြဂုတ်လတွင်အိမ်များအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အခြားအထူးထုတ်ဝေမှုကိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့
Mario + Rabbids Kingdom Battle သည် FullHD resolution ကိုထောက်ပံ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
Mario + Rabbids Kingdom Battle ဂိမ်းသည် resolution အနည်းဆုံးဖြစ်သည့် 900p ထက်မပိုသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Crash Bandicoot N´Sane Trilogy ပာဥရောပ၌မှတ်တမ်းများကိုဆက်လက်ချိုးဖောက်နေပါတယ်။
Crash Bandicoot N´Sane Trilogy သည်ယူကေရှိနံပါတ် ၁ တွင်ရက်သတ္တပတ်အရှည်ဆုံးနှင့်အတူ PlayStation4သီးသန့်ဖြစ်လာသည်။
Sony သည် PlayStation Plus စျေးနှုန်းများကိုမြင့်တက်စေပြီးဒေသခံများကဒေါသထွက်ကြသည်
PlayStation Plus စျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်သွားပါမည်။
Sega ဂန္ထဝင်များသည် SEGA Forever ဖြင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအခမဲ့ရရှိခဲ့သည်
ဂျပန်ကုမ္ပဏီ SEGA သည်၎င်း၏ app consoles များအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဂန္ထဝင်ဂိမ်းများကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
ဆိုနီသည် Minecraft Cross-platform အတွေ့အကြုံတွင်မပါဝင်ပေ
Sony သည် Minecraft ဂိမ်းအတွက် Microsoft အားပေးသော multiplayer နှင့် multiplayer အတွေ့အကြုံများကိုပါဝင်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်
သင်အသုံးပြုနေစဉ်၎င်းသည် Logitech mouse pad ဖြစ်သည်
Logitech သည်သင်၏ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအားသွင်းနိုင်သည့် mouse pad တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ သင်သိလိုပါသလား။
ပြီးခဲ့သည့်ညကသူတို့အွန်လိုင်းဖြစ်ရပ်တွင်သူတို့တင်ပြခဲ့သည့်အရာများအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ရန် Nintendo လုပ်ဆောင်နေသောကြီးကျယ်သောအလုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှု။ မရပါ။
ဤအရာများသည် Sony PlayStation မှ E3 2017 တွင်ကြေငြာခဲ့သောဂိမ်းအသစ်များဖြစ်သည်
E3 2017 ကာလအတွင်း Sony PlayStation မှကြေငြာခဲ့သောဂိမ်းအသစ်များအားလုံးကိုသင်သိလိုပါက trailers များဖြင့်တင်ထားသောဤ post ကိုမလွတ်သင့်ပါ။
Ubisoft ၏ E53ကွန်ဖရင့်၌ Asassin ၏ Creed Origins နှင့် Far Cry 2017
Ubisoft သည် The Crew II ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့မသိသောဂိမ်းအချို့နှင့်မိတ်ဆက်ရန်အခွင့်အရေးယူခဲ့ပြီး Asassin's Creed Origins နှင့် Far Cry5အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။
E3 2017 မှအီလက်ထရောနစ်အနုပညာညီလာခံမှပေးအပ်သောအရာအားလုံး
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၏ကျန်ရှိသောအီလက်ထရောနစ်အနုပညာနှင့်မည်သို့ ၂၀၁၈ ကိုစတင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြပါမည်။
ဤရွေ့ကားဇွန်လ 2017 အတွက် PlayStation Plus နှင့် Xbox Live Gold ဂိမ်းများဖြစ်ကြသည်
ကျယ်ပြန့်စွာသင်၏မျက်စိကိုဖွင့်ပါ၊ အကြောင်းမှာဤသည်များသည်ဇွန်လတွင် PlayStation Plus နှင့် Xbox Live Gold အတွက်ရောက်ရှိလာသည့်အခမဲ့ဂိမ်းများဖြစ်သည်။
Pokélandသည်မကြာမီ iOS နှင့် Android အတွက်Pokémonဂိမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
Pokélandသည်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုနှစ်အတွင်း operating system နှင့်အတူမိုဘိုင်းပစ္စည်းအသုံးပြုသူများအတွက် ...
သင့်ကို Nintendo Switch တွင်မိဘထိန်းချုပ်မှုကိုမည်သို့မည်ပုံ configure လုပ်ရမည်ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်။
သင်ဆဲပိုကီမွန် GO ကစားနေပါသလား လာမည့် update ကိုဒဏ္Legာရီပိုကီမွန်ထည့်ပါလိမ့်မယ်
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ပိုကီမွန် GO ဖြစ်ရပ်သည် Niantic နှင့် Nintendo တို့အတွက်အမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။
PlayStation Store တွင်အထူးလျှော့စျေးများကသင့်အသက်ရှုခြင်းကိုပျောက်စေနိုင်သည်
သင်သိသည့်အတိုင်း Sony PlayStation မှယောက်ျားများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများမှတစ်ဆင့်အရည်ရွှမ်းသောကမ်းလှမ်းမှုကိုစတင်ရန် ...
အီစတာကမ်းလှမ်းမှုများသည် PlayStation စတိုးသို့ရောက်ရှိလာပြီး၎င်းမှာဖြစ်သည်
Sony သည် PlayStation Store ရှိသူတို့၏ console များအားလုံးအတွက်အီစတာရောင်းအားနှင့်ကောင်းမွန်သောခေါင်းစဉ်များပြင်ဆင်ထားသည်။
Call of Duty သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏မူလအစသို့ပြန်သွားသည်
Call of Duty သည်မူလအစသို့ပြန်သွားလိမ့်မည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သည် Saga တွင်နောက်ထပ်ဂိမ်း၏စစ်မြေပြင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
GameStop သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဆိုင်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကိုပိတ်ပစ်လိမ့်မည်
ဒီဂျစ်တယ်ရောင်းချမှုသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ GameStop သည်စတိုးဆိုင် ၁၀၀ ကျော်မကြာမီပိတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
နှလုံးရောဂါကုသမှုသည် PlayStation စတိုးတွင်ရှိသည်
Sony သည်ယခုအချိန်တွင် PlayStation ၏အထူးသီးသန့်ထုတ်လုပ်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Zelda: Breath of the Wild ဟာ PC ပေါ်မှာတော်တော်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်
ဝေဖန်သူများ၏အဆိုအရ Nintendo ၏သီးသန့်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ...
Modern Warfare တွင်ပါ ၀ င်သောသီးသန့်အကြောင်းအရာများ - စိန့်ပက်ထရစ်နေ့အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသောအဖြစ်အပျက်သည်ပြီးခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့မှစတင်မည်ဖြစ်ပြီး developer ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရသုံးပတ်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
LA Noire သည်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်သစ် console များသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်
LA Noire သည်ဤဂန္တ ၀ င်ဂန္ထဝင်သည်နောက်ဆုံးသောမျိုးဆက် console များကိုတံခါးကြီးကြီးမှတဆင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်။
ယခုအခါ iOS နှင့် Android အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဂန္ထဝင်ဂိမ်းဖြစ်သော Ghost နှင့် Goblins
ထို့အပြင်ယနေ့နံနက်၌ဤဒဏ္myာရီဆိုင်ရာ Arcade ဂိမ်း Ghost နှင့် Goblins ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Resident Evil: ဖွင့်ပြချက်များသည် PlayStation4နှင့် Xbox One အတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်
Resident Evil သည်ယင်း၏ကစားသမားများကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအပြီး၌တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောအရာများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်စေခဲ့သည်။
Capcom ရဲ့ဝါရင့် 1942 ဂိမ်းဟာ Android ထုတ်ကုန်တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ၁၉၄၂ မိုဘိုင်းဂိမ်းကို iOS သုံးစွဲသူများအတွက်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Battlefield 1 ကစားရန်ဖိုရမ်များတွင်အဖွဲ့အစည်း၏အောင်မြင်မှု
Andromeda: Mass Effect ၏ဂိမ်းမိနစ် ၃၀ ကိုကြည့်သည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသောအရာမှာ Mass Effect ၏မိနစ် ၃၀ ထက်မနည်းပါ။ Andromeda, ဒီ Saga တွင်နောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ Nintendo Switch အတွက် Mario Kart 8 Deluxe ၏သီးသန့်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်
Super Mario Kart Deluxe တွင်ပါ ၀ င်သည့်အသစ်အဆန်းများသည်ယခင်ဗားရှင်းတွင်သင်မတွေ့ရသော Nintendo Switch အတွက်ဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကား 70% အထိ, PS Store ကိုအပေါ်အထင်ကြီးအထူးလျှော့စျေးဖြစ်ကြသည်။
PlayStation Store မှတစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်လျှော့စျေးများပေးထားသည့်ဂိမ်းများကိုပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာပါမည်။
သင်၏ Nintendo Switch ပေါ်တွင်စတစ်ကာများတပ်ထားခြင်းသည်၎င်း၏ပလပ်စတစ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်
ဒီတော်လှန်ရေးခလုတ်ပိုင်ရှင်အားလုံးကိုထောက်ခံချက်ပေးချင်တယ်။ ဗီနိုင်းတွေ၊ စတစ်ကာတွေကိုမထည့်ပါနဲ့၊
Switch digital store သည်သင်၏ Nintendo အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်
နောက်ဆုံးပေါ်ပေါက်ကြားမှုများအရ Nintendo Switch သည်အခြားပြိုင်ဘက်များနှင့်ဆင်တူသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စတိုးတစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Classic Mini NES နဲ့သုံးလကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲဒါဟာထိုက်တန်ရဲ့လား။
နောက်လှည့်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ၅၉.၉၉ ယူရိုကိုငါတို့ပေးခဲ့တာသတိရတာ။ ငါတို့နှင့်အတူနေပါ။
Zelda: တောရိုင်း၏အသက်ရှုမရောက်သေးဘူး၊ ယူရို ၂၀ DLCs ရှိပြီးဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးသတင်းက Zelda: Wild of the Breath သည်စျေးကွက်သို့မရောက်ရှိသေးသော်လည်းယူရို ၂၀၊ DLC များရှိပြီးဖြစ်သည်။
ပိုကီမွန် Go ဂိမ်း update ကိုယခုအပတ်တွင်လာမည့်
မနေ့ကပဲငါတို့ဟာမိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေအတွက်Pokémon Go ဂိမ်းအသစ်ရဲ့ဗားရှင်းအသစ်က ...
Gokget News တွင်ရေးသားခဲ့သောPokémon Go နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများအပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ...
Xbox One တွင်မကြာမီ mouse နှင့် keyboard အထောက်အပံ့များရရှိနိုင်သည်
ပြင်ပမောက်စ်နှင့်ကီးဘုတ်ကိုချိတ်ဆက်ရန် Xbox One မှအထောက်အပံ့များမကြာမီအချိန်ကြာမြင့်မည်ဟုထင်ရသည်
Call of Duty: Infinite Warfare 'Sabotage' DLC နောက်ဆုံး၌ PlayStation4သို့ရောက်လာသည်
Call of Duty: Infinite Warfare သည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့် DLC အသစ်များကိုဆက်လက်လက်ခံရရှိနေသည်။
Rainbox Six: ဒီလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဝိုင်းထားခြင်းဟာအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်
Rainbox Six: Siege သည်ကမ္ဘာတလွှားမှမရေမတွက်နိုင်သောကစားသမားများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတနင်္ဂနွေတွင်အခမဲ့လွတ်မြောက်လာသောစိတ်ကူးကောင်းသော MPFPS
Super Mario Run ကို Nintendo ကဒေါ်လာ ၅၃ သန်းထုတ်လုပ်လိုက်ပြီ
Super Mario Run အောင်မြင်မှုရှိသော်လည်းဂျပန်ကုမ္ပဏီသည်အက်ပလီကေးရှင်းကို ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၃ သန်းသာထုတ်လုပ်သည်ဟုဆိုသည်
Masco Nakamura သည် Namco ကိုတည်ထောင်သူနှင့် Pac-Man စတင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ခံသည်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်
Arcade ဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံမူများအကြောင်းပြောသောအခါခေါင်းစဉ်များစွာသည်စိတ်ထဲပေါ်လာသည်။ သို့သော် ...
Square Enix နှင့် Marvel တို့သည် Avengers ဗီဒီယိုဂိမ်းတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်
ဂျပန်ကုမ္ပဏီနှင့် Marvel သည် The Avengers ကို အခြေခံ၍ ဗီဒီယိုဂိမ်းထုတ်လုပ်ရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
Microsoft က Windows 10 Mobile အတွက် Minecraft ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်သည်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည် Minecraft ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Windows 10 Mobile အတွက်မွမ်းမံမှုများကိုစွန့်လွှတ်ရန်စီစဉ်နေသည်
စပိန်နိုင်ငံရှိ NVIDIA Shield TV အသစ်ကိုယခုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
NVIDIA Shield သစ်ကိုအသုံးပြုသူအား 4K HDR ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုကစားရန်စွမ်းရည်ပေးသော streaming beast တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ Nintendo Switch အတွက်အတည်ပြုထားသောဂိမ်းများစာရင်းဖြစ်သည်
Nintendo Switch သို့မကြာမီရောက်ရှိလာမည့် developer များမှအတည်ပြုထားသောဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဤတွင်သွားကြသည်။
မနေ့က Nintendo Switch အတွက်ဂိမ်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအချို့
Nintendo ၏ Switch အသစ်ကိုတရားဝင်ရှာဖွေရန်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။ ဤအချိန်တွင်အမျိုးမျိုးသော ...
လာမယ့်သောကြာနေ့မှာ Nintendo Switch နဲ့တွေ့မှာပါ။ ဒီဂိမ်းတွေကအတည်ပြုပြီးသားပါ
လာမည့်သောကြာနေ့တွင်တရားဝင်တင်ဆက်မည့် Nintendo Switch အသစ်အတွက်အတည်ပြုပြီးသောဂိမ်းများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင်ပြပါမည်။
PlayStation4သည်ခရစ်စမတ်လှုပ်ရှားမှု၏လက်ဆောင်ဖြစ်သည်
ဂျပန်တံဆိပ်၏ခလုတ်သည်ဒီခရစ်စမတ်ကင်ပိန်းမှာယူနစ် ၆ သန်းကျော်ရောင်းခဲ့ရပြီးလူတိုင်းကိုစကားမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဂိမ်းများကို USB မှတဆင့် Nintendo Classic Mini NES တွင်သင်ထည့်နိုင်သည်
ရုရှားနှင့်ဂျပန်ဟက်ကာများသည် microUSB ဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့်နောက်ထပ်ဂိမ်း ၂၅ ခုကို Nintendo Classic Mini တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။
iOS အသုံးပြုသူများအတွက်အချိန်အနည်းငယ်သာရောင်းချပေးသော Space Marshals 2
App Store တွင်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်သောအခါပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာသည်။
Minecraft သည် ၄ ​​ကြိမ်မြောက် Apple TV သုံးစွဲသူများထံရောက်ရှိခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က Apple တီဗီသုံးစွဲသူများအတွက်ဤဂိမ်းရောက်ရှိလာခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Star Wars: PS Store တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းများဖြင့် Battlefront နှင့် GTA V တို့ကိုရနိုင်သည်
ဤနှစ်ရက်၏ကမ်းလှမ်းမှုများသည် Star Wars - Battlefront နှင့် Grand Theft Auto V တို့ကိုယူရို ၁၅ နှင့်ယူရို ၃၀ အသီးသီးသာရှိသည်။
500.000 ကျော် Nintendo Classic Mini NES သည်ပြန်လည်အောင်မြင်မှုကိုအတည်ပြုသည်
Nintendo သည် ၅၀၀,၀၀၀ ကျော်ကျော်သော Nintendo Classic Mini ကိုဖြတ်သန်း။ ရောင်းချနေသည်၊ ထိုခလုတ်ခုံသည်မကြုံစဖူးအောင်မြင်မှုရစေသည်။
Call of Duty: Modern Warfare Remastered သည်ကြီးမားသော update ကိုရရှိသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကူးနိုင်သည့်နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိသော Call of Duty တွင်အကြီးဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
Xbox update တစ်ခုသည်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းကိုတစ်ခုတည်းတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်
Xbox One လည်ပတ်မှုစနစ်သို့ဤနောက်ဆုံးသတင်းသည်ကောင်းမွန်သောကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုများဖြင့်ဒေါင်းလုပ်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေမည်ဟုကတိပြုသည်။
Super Mario Run ဂိမ်းကို App Store တွင်ရနိုင်သည်
BioShock သည် Xbox One နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သောသတင်းများကို retro လိုက်ဖက်သည်
Star Wars - Xbox One အသုံးပြုသူများအတွက် Battlefront သည်အခမဲ့ဖြစ်လာပြီး BioShock စီးရီးများသည်နောက်ပြန်သဟဇာတဖြစ်သည်။
RetroEngine Sigma, အားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရန် retro console တစ်ခု
NEO-GEO မှ PlayStation အထိခေါင်းစဉ်များကိုသင်ခံစားနိုင်သည့် RetroEngine Sigma တစ်ခုဖြစ်သည်။
တရားဝင် F1 2016 ဂိမ်းကို Android အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ
ယခုနှစ် Formula One အသစ်သည် Android သုံးစွဲသူများသို့ရောက်ရှိလာပြီ ဒီကိစ္စမှာ…
Microsoft က Xbox One ၏စျေးနှုန်းကိုဒီဇင်ဘာ ၃၀ အထိလျှော့ချသည်
Xbox One ၏စတော့ရှယ်ယာအားလုံးကိုချွေတာရန်နှင့် Xbox One S ကိုအာရုံစိုက်ရန်အတွက်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က၎င်း၏ Xbox One ၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချခဲ့သည်
Pokémon Sol နှင့် Luna တို့သည် Nintendo 3DS ရောင်းအားကို ၃၆၁ ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်
Nintendo 3DS အရောင်းသည် ၃၆၁% တိုးတက်ခဲ့ပြီးပိုကမ်မွန်ဂိမ်းဖြစ်သည့် Sun and Moon ထုတ်ဝေမှုတွင်နောက်ဆုံးဂိမ်းစတင်ခဲ့သည်။
"Black Friday" သည် PlayStation Store တွင်တနင်္လာနေ့အထိဖြစ်လိမ့်မည်။
PlayStation Store ရှိဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင်မည်သည့်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများကိုသင့်အားပြမည်နည်း။ ထို့ကြောင့်သင်ဤခေါင်းစဉ်များနှင့်အချိန်များစွာရနိုင်သည်။
Nintendo Switch ကို ၂၃၆ ယူရိုနဲ့ ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်
ဗြိတိသျှစတိုးဆိုင်တစ်ခုသည် Nintendo Switch ကိုကြိုတင်ရောင်းချမှုကိုပေါင် ၁၉၈ ဖြင့်သာရောင်းရန်ယူရို ၂၃၆ ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
Android နှင့် iOS အတွက်ဒဏ္myာရီကတ် Solitaire သည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်
၎င်းသည် ၀ င်းဒိုး operating system တွင်သုံးစွဲသူများစွာသိသောပထမဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခု၎င်းသည်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
PlayStation သည်ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းများကို ၇၀% အထိလျှော့စျေးဖြင့်ချဲ့ထွင်ထားသည်။
PS Store သည် Black သောကြာနေ့မတိုင်မီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် PlayStation 70 အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေါင်းစဉ်များစွာအတွက် ၇၀% အထိလျှော့စျေးပေးသည်။
ကစားစရာများ´R Nintendo ခလုတ်၏စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့မှားယွင်းစွာစစ်ထုတ်သည်
ကနေဒါလက်အောက်ခံ Toys UsR Us သည်၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် Nintendo console အသစ်၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုမှားယွင်းစွာပေါက်ကြားခဲ့သည်။
PlayStation4Pro သည်အလွယ်ကူဆုံးသော console ဖြစ်နိုင်သည်
iFixit မှလူများကကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းကောင်းပေးသည်။ Sony console သည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၁၀ အနက်မှ ၈ ခုကိုရရှိခဲ့သည်
Wii U console သည်သေလောက်ပြီ